musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Inononoka Kudzoserwa KwePost-COVID Kambani Yemhepo Kufamba
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ne COVID-19 kuputika kumanikidza nyika yemubatanidzwa kuti ishande pamaitiro ekuderedza mutengo, mari yekufambisa inotarisirwa kusangana nehutungamiriri hwakawedzera kuti vawane mikana mitsva yekuchengetedza mutengo.
Nekuda kwekuputika kwe COVID-19, makambani ari kutsvaga nzira dzekudzora pamari dzavanoshandisa.
Pre-denda, vafambi vemakambani vakamiririra ingangoita hafu yezvese zvihombe zvemari yemari.
Kufamba nendege kubhizimusi kunotarisirwa kudzikira zvachose nezvikamu gumi nepfumbamwe kubva muzana.
Nemari iriko nekuda kwekupararira kwe COVID-19, makambani ari kutsvaga nzira dzekudzora pamari dzavanoshandisa. Izvi zvaunza kutarisiro yemubatanidzwa yemhepo. Pre-denda, vafambi vemakambani vakamiririra ingangoita hafu yezvose zvikuru mari yendege, inosvika 1.7 muzana yeGDP yepasirese. Nekudaro, nekuda kwedambudziko riri kuenderera mberi, kufamba nendege kwebhizimusi kunotarisirwa kudzikira zvachose ne19 muzana.
Pakaiswa ganhuriro dzekufamba pasirese, mabhizinesi akatsiva misangano yakanangana neiyo chaiyo kuti denda ripararire. Mabhizimusi mazhinji akashandurwa kuita misangano chaiyo uye akaona kuti haisi misangano yese inofanirwa kunge iri-yemunhu. Mabhizimusi akaona zvakare kudhura kwemari pamari yekufambisa nendege.
Mune ramangwana, kufamba nendege ichave nzira yekufunga uye yekufunga yekufamba, ichibvumira vashandi kuti vave nehupenyu huri nani uye vashandirwi kuti vadzokere zviri nani mukudyara.
Makambani ari kuronga misangano chaiyo uye iyi modhi yave kunyanya kufarirwa nevakawanda vavo. Ivo vakaziva kuti -munhu-misangano haigare ichidikanwa. Iyo post-pandemic yemahara yebasa modhi iyo inosanganidza kumeso-kumeso uye chaiyo setups inogona kuita kuti mabhizinesi abudirire nepo kudzikamisa iyo kambani yekufamba mitengo. Vashandi vanofanirwa kufamba chete kana zvichinyanya kudiwa. Heano mamwe ematanho ari kutorwa nemakambani kudzikisa kufamba kwendege bhizinesi uye kusimbisa mari:
Kutarisira mari: Anenge maindasitiri ese akatarisana nedambudziko nekuda kwedenda kusvika pamatanho akasiyana. Mune izvo, makambani ari kushingairira kutarisa matanho ekuburitsa mari pese pazvinogoneka. Kurambidza kufamba kwebhizinesi kuri pamusoro pezita ravo, umo ivo vari kudzima kwese kufamba kusiri-kwakakosha.